သစ်အရောင်းအဝယ် နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်စေချင် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| April 25, 2012 | Hits:518
0 | | ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာပြည်အပေါ် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများ တနှစ် ယာယီရုပ်သိမ်းပေးပြီဖြစ်ရာ ကျွန်းနှင့် တခြားသစ်မာများ အရောင်းအဝယ် ပြန်လည် စတင်နိုင်ဖွယ် ရှိသောကြောင့်တရားမဝင် သစ်ခိုးထုတ်မှုများကို ရှောင်ကျဉ်ပြီး ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်များ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အသုံးပြုစေလိုကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်သူများက ပြောဆိုလိုက်သည်။
မြန်မာ့သစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခု (ဓာတ်ပုံ - Getty Images)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မစ္စ ကလင်တန် ဓာတ်ပုံပါ ဂျာနယ်များ အရောင်းသွက်
လိုင်စင်မဲ့ကား ၆ စီး ထပ်ဖမ်းမိ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment jane April 25, 2012 - 8:10 pm	Where is the tree to sell OMG, even no cloud at all time in myanmar , have you been all careful that? OMG
Find money from other ways like improve education system n apply.
Please don’t send us to the hell before we die.plsssssssss
Reply	pps12345 April 25, 2012 - 9:11 pm	ဦးတေဇ နှင့် ဦးဝင်းအောင် ကို စည်းရုံးနိုင်မှ ကျွန်းတောတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
Reply	san April 25, 2012 - 9:13 pm	မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောပြုန်းတီးမှု့မှာ တ၇ုတ်မှမြန်မာ့ကျွန်းများကိုအလကားနီးနီးယူကြတယ်။သစ်ခွဲစက်တောင်ကြည့်မြန်မာန်ိုင်ငံနယ်စပ်နားမှာလာဆောက်ထားတာ။မြန်မာအစိုးရနာတတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကိုအရမ်းစိတ်နာဖို့ကောင်းတယ်။မြန်မာ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားလည်းယူသေးအကြွေးတင်အောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိဘူး။မြန်မာအစိုးရ တရုတ်နဲ့ပေါင်းတာ ပြည်သူတွေပြာကြသွားးတာနဲ့တရုတ်တွေမြန်မာပြည်ထဲဝင်ခြင်သလိုဝင်တာဘဲအဖတ်တင်တယ်။အုပ်ချူပ်ခဲ့သူပညာရှိများ
Reply	Lwin Aung Soe April 26, 2012 - 3:30 am	ကျွန်းနဲ့ အခြားသစ်မာမှန်သမျှ ခုတ်လှဲခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှန်သမျှ နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားသင့်ပါပြီ။ သစ်တောများ ပြန်လည် စိမ်းလန်းစိုပြေရန် အခြေအနေကောင်းလှမှသာ စနစ်တကျ ခုတ်လှဲခြင်းနှင့် ဥပဒေအတိုင်း မှန်ကန်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ခွင့်ပြုသင့်ပါသည်။ သစ်တောများ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာရသော သဘာဝဆိုးကျိုးများအတွက် ကုန်ကျရသော ငွေကြေးပမာဏက သစ်ရောင်းရငွေထက် အဆများစွာ မလိုအပ်ဘဲ ကုန်ဆုံးစေပါသည်။
Reply	niniyeye April 26, 2012 - 9:34 am	အဲဒါ တရားမ၀င် ခိုးသစ်တင်နေတဲ့ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။သစ်လုံးမှာဘာတံဆိပ်မှလည်းမပါဘူး၊သစ်ထုတ်ရေးမှာလူဖြင့်သစ်တင်ခြင်းမရှိလောက်ပါဘူး။
Reply	sanloitai April 26, 2012 - 8:01 pm	ဥရောပဈေးကွက်ရမှ ဈေးကောင်းရမှာ
Reply	ပြည်သူ့သား April 27, 2012 - 9:35 am	ကချင်ပြည်နယ် ၏ သစ်တောဖြုန်းတီးမှုသရေခံဟာဇခုန်တိန်ယိန်းပါ
Reply	mgpouk April 28, 2012 - 1:48 pm	ကချင်ပြည်နယ်တွင် အ၇င်က လုံးပတ် ၅ ပေနဲ့အထက် ၇ှိမှသာ တ၇ားဝင်သစ်ခုတ်ခွင့် ပါမစ်ပေးပါသည်. ယခု မနှစ်ကစပြီး လုံးပတ် ၅ ပေ အောက် တ၇ားဝင်ခုတ်ခိုင်းပါသည်. အားလုံး ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ